Somaliland iyo Jabuti ha ka dhiidhiyaan halka lala marayo walaalahooda reer Somaliya. | Raadgoob
Waxgaradka reer Somaliland, Jabuuti iyo dawladaoodaba waxaa horyaala dhiilo naxdin leh oo ay tahay in ayna indhaha ka lalin.
Iyadoo aynu ka dheregsanahay cadaawadda joogtada ah ee ay dawaladda taagta daran ee Xamar ku hayso Somaliand ayay hadana shacabka reer Somaliya inaga mudan yihiin in aynu ilaashano.
Dawladda Federaalka isku sheegta ee Somaliya dhibaatooyinka noocyada badan ee ay ku hayso Somaliland iyo dawladdeedaba, waxaa ka sii daran kuwa ay ku hayso shacabka reer Somaliya oo ay maanta marinayaan in si qoor qabad ah in ay ugu kala qaybiyaan dhulkoodii Ethiopia iyo Kenya.
Aduunka aynu maanta joogno wuxuu taladeedu gacanta ugu jiraa dad tiro yar oo had iyo goor ku cabira, kuna qiimeeya aadamaha aduunka kula nool oo dhan hadba halka ay ka soo galaan danaha ay iyaga gaarka u ah. Waxaynay ku adeegsadaan oo hawlahooda u fuliya dawaladdo waawayn oo uu Maraykanku hor kacayo, oo iyaguna sii adeegsada dawladdo yar yar sida kuwa imika inagala dhamaan la’ maalgalin baan idiin wadnaa dhinca Somaliya iyo Somalilandba.
Dadkaa yari waxay gacanta ku hayaan khayraadka aduunka ku baahsan, mana ogola in cidi ugu timaado. Hadaba walaalayaal kooxdan yar ee danahooda ku egi, waxay dan moodeen oo u soo baxday in dadka Somalida ahi ayna u carbismayn sida ay iyagu u rabaan ee dadyowga aduunwaynaha kale ugu carbisan yihiin, taasina ay keeni karto in khayraadka Somaliya ku jira aan Somalida lagala macaamili Karin. Markaana ay adag tahay in ay la gali karaan heshiisyo wax ku ool ah oo midho dhal ah. Sidaa awgeedna dhulkooda lagu wareejio dawlado iyaga u carbisan una dhago nugul kooxdan si ay u hantiyaan khayraadkaa ilaaahay siiyey dadka Somaliyeed.
Sida aad la wada socotaan Somaliya ilaa iyo burburkii wixii ka danbeeyey waxaa si cad oo badheedh ah gacmaha ula soo galay dawladdo shisheeye oo fulinayey in ayna Somaliya xal u helin aafooyinka loo soo waariday. Waxaa mar walba la dul keenayey oo madax looga dhigeyey dad Somaaliyeed oo dala kale u soo cumaamadeen. Ilaa iyo maanta shacabka walaalaheen ee reer Somaliya awood uma yeelan in ay doortaan madax iyaga matasha oo ay iyagu taladooda ku keeneen.
Waxaa yaabka yaabkiis ah in si qun yar oo fudud uu raysal wasaaraha Ethiopia uga soo dago Muqdishu, saacado gudeehna lagu saxiixo qodobo xasaasi ah oo umad dhan masiirkeed ah, oo aan horey looga war hayn. Waxa kaloo wax laga naxo ah in durba shacabkii ay galeen xaalad asqo ah oo ay kala garan la’ yihiin wixii u dan ah.
Shacabka reer Somaliya waxaan la tiigsanayaa su’aalaha ah: anigoo aad uga walaacsan aamusnaanta lagaga jawaabay arinkan ugubka ah ee aan hore loo arag; miyaad daasheen oo waad isdhiibaysaan ? Ma waxaad ogoshihiin in la idiin qaybiyo Kenya iyo Ehtiopia ? Hadii ay wali jiraan dad miyirkii ku hadhay, kana badbaaday aafooyinka loo soo maleegayey wakhtiga dheer, Somaliyey ka kaca fadhiga oo xidhiidh hoose oo Somalinimo, oo garasho sal u tahay, oo lagu badbaadinayo dadka iyo dalka Somaliya in lagu dhaqaaqo. Halgankaasi dareenkiisu ha kasoo bilaabmo shacabka reer Somaliya ee qarka u saran in la cidhib tiro.
Somaliland iyo Jabuti waxaan leeyahay maanta qolo qolo ma joogto. Waxaad haysataan fursad aad ugu hiilan kartaan walaalihiin. Waxaa muhiim in aad hormood ka noqotaan qorshe lagu abaabulayo kacdoon shacbi oo xoogan si Somaliya looga samatabixiyo shirqoolka loo maleegay ee lagu wareejinayo dalkooda. Hadaad dhegaha ka furaysataan taaha ka soo yeedhaya walaaladiin, sow waxaynu wada sugnaaba ma aha odhaahdii ayhd “kii qayrkii loo xiirayoow soo qooysa adiguna”.
Alayahoow adigaa awooda in aad fashiliso qorshayaasha la a damasan yahay shacabka masaakiinta ah ee la darxumaysan dhibaatooyinka looga soo waaridayo aduun waynaha intiisa kale. Alahayow adigaa awoodee na nabadgali.